दुई पाइलटले हाँकेको अनियन्त्रित जहाज, के को-पाइलटले दुर्घटना हुनबाट बचाउलान ? - News Bihani
सत्तारुढ नेकपा यतिबेला गम्भीर संकटमा छ । दुई अध्यक्षको पत्र युद्ध पछि नेकपा विभाजनको संघारमा रहेको ब्याख्या गर्न थालिएको छ । सम्वृद्धि,स्थायीत्व,सुशासन र बिकासको नारा बेचेर करिव दुई तिहाइ ल्याएको नेकपा सत्तामोहमा चुर्लुम्म डुबेको छ भने आम मतदाताको विश्वास र भरोसामाथि संगिन प्रहार भएको छ । रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि उनले कोसेली स्वरूप दिएको भांगको ( राजनीतिक ) लड्डुको असर यतिबेला नेकपामा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई आ–आफ्नो बाटो लागौं भनेपछि तातेको नेपाली राजनीति अहिलेसम्म सेलाउन सकेको छैन । करिव अढाई वर्षदेखि कहिले साम्य हुँदै त कहिले उत्कर्षमा पुग्दै आएको नेकपाको विवादले नेकपालाई मात्र होइन देशलाई नै बन्धक बनाएको छ । कहिले एक अर्कालाई हटाउन हस्ताक्षर, कहिले कुनै पनि बैठक नबोलाउने र पार्टीको कुनै पनि निर्णय नमान्ने परिस्थिति त कहिले दल बिभाजन विधेयकले गम्भीर बनेको नेकपा फेरी पत्र युद्दको नयाँ लफडामा फसेको छ । देशमा स्थायीत्व र सम्वृद्धिको सपना देखेर जनताले दिएको अधिक जनमतमाथि नेकपाको रबैयाले उनीहरुको सपनामाथि पानी फ्याकेको छ ।
इतिहास कै शक्तिशाली सरकार र ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि देशमा राजनीतिक स्थायीत्व, स्थिर सरकार र देशले बिकासमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्ने आशा आम नेपालीमा रहेकोमा अब त्यो आशा बिस्तारै तुहिएर गएको छ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा ऐतिहासिक संघीय संरचना खतरामा परेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । संघीयताको बिरोध गर्दै आएका ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा परेको महसुस आम नेपालीले गर्न थालेका छन् । नेपाली जनताले आफ्नै गाउँगाउँमा सेवा, सुविधा पाउने गरी अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह तथा हजारौ शहिदको रगतले प्राप्त यो उपलब्धि पहिलो संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान पाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान पाएका छन् । त्याग, तपस्या र बलिदानको इतिहाससँग जोडिएको माओवादी जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । देशमा नौ-नौ महिनामा सरकार बदलिने खेल र स्थायीत्व एबं आर्थिक विकासको भोक प्यास मेटाउन आम मतदाताले रोजेको तदकालिन एमाले-माओवादी गठबन्धन एक कार्यकाल नै पुरा नगरी दुर्घटना हुने अबस्थामा पुगेको छ ।
नेकपा विवाद अब केपी ओली र प्रचण्डबाट मात्र समाधान नहुने प्रष्ट देखिएको छ । पार्टी बचाउन शिर्ष नेताहरु माधबकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल,बामदेब गौतम र सचिबालय सदस्हयरुको अब कस्तो भूमिका हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । मध्यमार्गी नेताको रुपमा चिनिएका माधबकुमार नेपालको भूमिका अब कस्तो रहला भन्ने अहिले धेरैको जिज्ञासा समेत रहेको छ । अहिले दुई पाइलटले हाँकेको अनियन्त्रित जहाज ( नेकपा ) के, को-पाइलट ( शिर्ष नेता ) ले दुर्घटना हुनबाट बचाउलान? अब धेरै नेता कार्यकर्ताको प्रश्न बन्न पुगेको छ । नेकपाभित्रको अस्तित्वको लडाँइ,आन्तरिक कलह र सबै म नै हुँ भन्ने प्रबृतिका कारण नेकपा पार्टी नभई अबसरबादीहरुको ग्याङ्ग बन्न पुगेको छ । ओली प्रवृत्तिका कारण प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा बढेको छ भने हजारौं शहिदहरुको बलिदानबाट प्राप्त यी सबै उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नका निमित्त विगतको कमी कमजोरीहरु सच्याई अब सही बाटोमा लाग्न मार्गनिर्देशन सबै राष्ट्रबादीहरु एक हुनुपर्ने समय आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा बसेर हजारौ उखानका टुक्का वर्षाए तर विकासका मुहान फुटाएनन । आफ्नो मात्र गुलामी गर्नुपर्छ र आफुलाई मात्र महान् भन्नुपर्छ भने घमण्डको बोझिलो (मानसिकता) भारी लिएर हिड्ने ओलीले कहिल्लै त्यो भन्दा माथि उठेर सोच्न सकेनन् ।
ओलीले विकासको रित्तो थुन्चे बोकेर हिँडेर बाहिर विकासका नाराको प्रचार गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाए । तर व्यवहारमा उनले छल कपट बाहेक केहि गरेनन । पुराना केही राजनैतीक घटना परिघटनालाई गम्भीर ढंगले केलाउने हो भने अब गणतन्त्रमा हमला हुने पक्का छ र त्यो दिन त्यती टाढा रहेको छैन । अहिलेको पहिलो प्रहार संघियता सिध्याउने देखिन्छ भने त्यसपछि गणतन्त्रमाथि नै हुनेछ । गणतन्त्रलाई मासेर बेबी किङको नाममा राजतन्त्र स्थापना गर्ने खेलमा केपी ओली लागेको अनुमान राजनतिक बृत्तमा सहजै गर्न सकिन्छ । नेपालको राजनीति अब २ ध्रुबमा बिभाजित हुने पक्का छ । एक राजाबादी जसको नेतृत्व ओलीसहित राप्रपाले गर्नेछ भने अर्को गणतन्त्रबादी जसको नेतृत्व पुर्व माओवादी पुर्व एमालेका केहि सहित प्रजातन्त्रबादीहरुले गर्नेछन । यसमा आश्चर्य त के छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामन्तहरुलाई साथ दिने पहिलो कम्युनिष्ट ओली बन्नेछन । उनको भूमिका अब निकट भविश्यमा राजतन्त्र बेबी किङको नाममा पुनस्थापित हुन सक्नेछ भन्ने व्याख्या गर्न थालिएको छ । उनकै घमण्ड र अदुरदर्शिताको कारणले जनताले दिएको बहुमतको अधिकार गुमाउनु पर्नेछ भने देश फेरी द्वन्द्वमा धकेलिने खतरा बढेको छ । ओलीले भाषण र उखानको नयाँ टुक्का बाहेक बाँकी अरु केहि नगरेको अहिले प्रष्ट देखिन्छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यतिबेला देश तहस-नहसमा छ । यो बेला रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट समेत भागेको छ भने आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि सत्ताको खेलमा बेमौसमको बाजा बजाउन संधै व्यस्त भएको छ । कहिले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव त कहिले पार्टी बिभाजन गर्ने प्रस्ताब आएपछि राजनीतिक बृतमा यसबारे चर्को बहस चुलिएको छ । सरकारले यो महामारीका बेला जनतालाई राहत र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा आफू नटिक्ने भएपछि ओलीले संधै फोहोरी खेल खेल्ने गरेका छन् । महाभारतमा जसरी हस्तिनापुरको राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह त्याग गर्न नसक्दा अपराधको भागिगार बने भने सिंगो कुरुराश्त्र युद्धमा बिनास भयो । बलबान र शक्तिशाली हुनेहरु पनि नियतिको खेलमा जलेर भष्म भए । सकुनिको छलको राजनीति दुत क्रिडामा काम आए पनि युद्धमा कुनै काम आएन । अहिले देश र जनता पिडामा हुँदा चुक्क नबोल्ने र केहि नगर्ने ओलीको मूल्यांकन जनताले अबस्य गर्नेछन ।
सरकारले समयमै शुसासनको प्रत्याभूती, मंहगी नियन्त्रण, करको बोझबाट आम नागरिकलाई मुक्त बनाउनु, शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था, सहज दैनिक जनजीवनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर त्यो गर्न सकेको छैन । अपराध ,कालोबजारी, भष्ट्राचार बढिरहेको छ भने ओली सरकारले भष्ट्राचारमा इतिहास रचेको छ । दुई तिहाइको सरकारलाई काम गर्न कसले रोक्यो ? जनताको उपचार गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नो लागि भने गाडी किन्न , विदेश भ्रमण गर्न,भत्ता खान जति पनि पैसा दिन सक्छ । यदि सत्तारुढ नेकपामा विभाजन आयो भने त्यसले देश र पार्टीलाई पार्ने असर सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक नै बढी हुनेछ । यो विभाजनबाट पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी कुनै पनि पक्षलाई फाइदा पुगिहाल्ने स्थिति देखिँदैन । र, यो कुरा पनि निश्चित छ कि नेकपाको फुटले उसको पार्टीलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि फाइदा गर्दैन । राजनीतिक अस्थिरता बाहेक मुलुकले केही पाउँदैन । त्यसैले नेकपाका लेताले आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनमत र जनभावना अनुरुप अघि बढ्न आबस्यक छ । अन्यथा इतिहासले सदैब धिकार्ने निश्चित छ ।
आइतवार, कार्तिक ३० २०७७०३:२८:५०